Clomiphene citrat (Clomid) ntụ ntụ (50-41-9) hplc ma98% | AASraw
Clomiphene citrat (Clomid) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọgwụ PCT / Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ
SKU: 50-41-9. Category: Ọgwụ PCT
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Clomiphene citrat (Clomid) ntụ ntụ (50-41-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ video
I.Raw Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ Characters:
aha: Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C32H36ClNO8
Ọbara arọ: 598.08
Melt Point: 116.5-118 ° C
II. Ntuchi Clomiphene citrate (Clomid ntụ ntụ) ojiji nke usoro steroid
1. Esi Clomiphene citrat (Clomid ntụ ntụ) aha:
A na-akpọkarị kọmpi na-akpọ Clomiphene site na SEROPHENE PERGOTIME, CLOMPHID, CLOMID, CLITIFATE CITRATE, CLOMIPEN CITRATE SALT.
2.Raw Clomiphene citrat ntụ ntụ (Clomid ntụ ntụ) Iji:
Clomiphene citrate / Clomid na-emekarị ka a na-agba ọsọ na 150mg kwa ụbọchị site na iji ọnụ,
gburugburu 4-5 izu.
3. Ịdọ aka ná ntị na Clomiphene citrat (Clomid) ntụ ntụ
Mmetụta dị iche iche nke clomiphene / ụbụrụ mmetụta dị nro dị nnọọ nro na ọtụtụ agaghị achọpụta ma ọ bụrụ na ha emee na ihe kachasị ya bụ ọhụụ na-ahụhụ. ma ọ bụ nanị mmetụta na-adịru nwa oge ma ọ ga-alọghachi na nkịtị mgbe ọ na-eji ya akwụsị. Ọtụtụ ndị na-agbakwụnye na SERM a na-ekwupụtakwa ihe otutu breakouts, karịsịa na azụ na ubu n'oge PCT ji ha; ebe nke a bụ otu n'ime clomiphene citrate / Clomid mmetụta dị na ihe kpatara ya bụ mmetụta nke testosterone dị ọcha ugbu a na-emepụta. Ozugbo ahụ na-abanye na ya, nke na-agaghị ewe ogologo oge ahụ ọkụ ahụ ga-ekpochapụ ma pụọ.
E nwere okpukpu abụọ Clomiphene / Clovid mmetụta ndị nwere ike ime, abdominal cramping or discomfort and flashes. Ma ihe gbasara nke puru omume bu oke ala.
Igwe ihe na-ekpuchi Clomiphene bụ SERM nke a na-eji ya eme ihe dịka enyemaka nke aka ya iji welie ntọhapụ nke ndị na-emepụta ihe. Clomiphene Citrate nwere ike iguzogide nzaghachi na-ezighi ezi nke estrogens na Hypothalamic-Pituitary-Ovarian-Axis. Nke a ga - eme ka nkwụsị nke Luteinizing Hormone (LH) na Follicle Stimulating Hormone (FSH) si dị mkpa. Site na ịmalite ịba ụba gonadotropin, nke a nwere ike iduga akwa a na-atọhapụ, si otú ahụ na-amụba ohere imepụta.
Clomiphene Citrate na-ebukwa ọgwụ nke estrogen nke nwere ike iji ọgwụgwọ, .. Site na ịgbakwunye Clomiphene Citrate n'oge anabolic steroid, SERM ga-ejide ndị na-anabata estrogen, ya mere na-egbochi horrosị estrogen ahụ.
Clomiphene Citrate nwekwara àgwà ndị na-arụ ọrụ bụ ndị bara uru iji anabolic steroid na-eji post anabolic steroid eji. N'ihe gbasara usoro ọgwụgwọ usoro (PCT).
5. Esi Clomiphene citrat (Clomid ntụ ntụ):
7. Esi Clomiphene citrat uzuzu (Clomid ntụ ntụ) Marketing:
III.Raw Clomiphene citrat (Clomid) ntụ ntụ HNMR
IV. Esi zụta Clomiphene citrat ntụ (zụta Clomid ntụ ntụ) si AASraw?
AASraw na-enye 99 dị ọcha% Clomiphene citrate / Clomid raw powder to bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka oral ojiji.
Ntu Clomiphene citrat ntụ ntụ (Clomid ntụ ntụ) Ezi ntụziaka:
Clomiphene gwakọta ahihia ntụ ọka: Ọ ga-ekwe omume imepụta Clomiphene citrate ngwa ngwa?
1 nyochaa maka Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ
Clomiphene Citrat (Clomid) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
Letrozole (Femara) uzuzu